Mapurisa Ane Zvombo Ozadzwa Mumaguta Kudzivirira Vanhu Kuratidzira
Poita mutauro nemawonero akasiyana-siyana pakubudirira kana kukundikana kwekuratidzira kwaitwa nhasi nerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU.
ZINASU yange ichikurudzira vanhu nyika yose kuti vagare mudzimba kuratidza kunyunyuta nemamiriro aita hupfumi hwenyika.
Mapurisa afumobata jongwe muromo mumaguta makuru emunyika akaita seHarare, Bulawayo, Gweru neMutare kuyedza kudzivirira vanhu kubatana nesangano revadzidzi reZinasu kuratidzira.
MuHarare mapurisa ange akawanda panzvimbo dzakaita seAfrica Unity Square nemimwe migwagwa pamwe nekuzvikoro zvose zvepamusoro. KuBulawayo mapurisa ange ari paBulawwato City Hall nedzimwe nzvimbo. Mumadhorobha makuru ose aya, vanhu vange varivashoma makuseni mumigwagwa asi vazowedzera nekufamba kwenguva.
Munyori mukuru, weZINASU VaJoseph Nyamayaro vati sangano ravo ravharisa zvikoro zvese pamwe nemamwe mabasa munyika sezvo vawana rutsigiro kubva kuvabereki nemasanagno akawanda.
Zinasu yati danho rayaatora rashanda zvikuru sezvo zvikoro zvikuru zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Great Zimbabwe University, Midlands State pamwe neNational University of Science and Technology zvisina kuita zvidzidzo. Pazvikoro izvi pamuka pakazadzwa mapurisa ange kapakatira zvombo.
Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika, VaObert Masaraure, veAmlagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe(ARTUZ) vatiwo ratidziro iyi yabudirira sezvo vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi.Asi mutauriri webazi rezvedzidzo Vataungana Ndoro vati vadzidzisi vakawanda vaenda kubasa.
Pane tsamba iri mumaoko eStudio 7 kubva kusangano rinoona nezvevashandi vehurumende republic Service Commission yange ichiti vattungamiri vemapazi ose ehurumende vanyore mazita evanhu vose vasina kuuya kubasa nhasi uye kuti vozodaidzwa kuti vatsanangure kuti sei vasina kuenda kumabasa.
Vemasangano aratidzira hapana nhengo dzavo dzarohwa kana kusungwa nekuti vanhu vangogara mudzimba dzavo.
Asi vamwe vemasangano akarerekera kuhurumende vapikisa izvi vachiti danho iri harina kubudirira sezvo vanhu vazhinji vaenda kumabasa kunyanya vanotengesa mumigwagwa nyika yose.
Asi sachigaro werimwe sangano revadzidzi rakarerekera kuhurumende reZimbabwe Congress of Students Union(ZICOSU) muMasvingo, VaBlessing Mulenga vati kuratidzira kwanhasi hakuna kubudirira.
Kunyange vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura mubvunzo yedu, Munyori mubazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko munyika, VaNick Mangwana vanyora padandemutnade ravo reTwitter kuti ratidziro yakundikana munyika mose vachiti vanhu vanga vachiita mabasa avo semazuva ose.
Mutauriri wemapurisa munyika , Assistant Commissioner Paul Nyathi, vati munyika mamswera muine runyararo sezvo kusina kumboitika mhirizhonga uye hakuna vasungwa.
Asi veZINASU nemamwe masangano akazvimiriria akaita serinonzi Pachedu vati kuratidzira uku kwabudirira sezvo mapurisa abatsira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kubva paakatanga kufambiswa mumigwagwa nezuro.